Luka 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
11 Ɛbae sɛ na ɔwɔ baabi rebɔ mpae, na ogyaee no, n’asuafo no mu biako ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, kyerɛ yɛn sɛnea wɔbɔ mpae,+ sɛnea Yohane nso kyerɛɛ n’asuafo no.”+ 2 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere biara a mobɛbɔ mpae no,+ monka sɛ, ‘Agya, ma wo din ho ntew.+ Ma w’ahenni mmra.+ 3 Ma yɛn da yi aduan+ sɛnea yehia no da biara. 4 Na fa yɛn bɔne firi yɛn,+ efisɛ yɛn ankasa nso de firi obiara a ɔde yɛn ka;+ na mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu.’”+ 5 Bio nso, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo mu hena na ɔwɔ adamfo a ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔdasum akɔka akyerɛ no sɛ, ‘Damfo, fɛm me paanoo abiɛsa, 6 na seesei ara na m’adamfo bi fi kwan so aba me nkyɛn, na minni hwee a mede besi n’anim’? 7 Na onii no bebua sɛ, ‘Gyae me haw.+ Yɛato ɔpon no mu dedaw, na me mma nkumaa ada wɔ me nkyɛn; merentumi nsɔre mmɛma wo hwee.’ 8 Mise mo sɛ, sɛ ɛyɛ n’adamfo a ɔyɛ nko nti a, anka ɔrensɔre mmɛma no hwee, nanso esiane sɛ oguan ne ho nti+ ɔbɛsɔre abɛma no nea ohia. 9 Enti mise mo sɛ, monkɔ so mmisa,+ na wɔde bɛma mo; monkɔ so nhwehwɛ,+ na mubehu; monkɔ so mmom na wobebue mo. 10 Na obiara a obisa no nya,+ na obiara a ɔhwehwɛ no hu, na obiara a obom no wobebue no. 11 Mo mu hena koraa na ɔyɛ agya a sɛ ne ba+ bisa no apataa a, ɔde ɔwɔ bɛhyɛ ne nsam na ɔremma no apataa? 12 Anaasɛ sɛ obisa kesua nso a, ɔde akekantwɛre bɛhyɛ ne nsam? 13 Enti, sɛ mo a moyɛ abɔnefo mpo nim sɛnea mode akyɛde pa ma mo mma a,+ hwɛ mpɛn dodow ara a Agya a ɔwɔ soro no de honhom kronkron+ bɛma wɔn a wobisa no!” 14 Akyiri yi, na ɔretu adaemone afi mum+ bi mu. Adaemone no fii no, ɔbarima a ɔyɛ mum no kasae. Na ɛyɛɛ nnipakuw no nwonwa. 15 Nanso wɔn mu binom kae sɛ: “Ɔnam adaemone panyin Beelsebub so na etu adaemone.”+ 16 Nanso, ebinom a na wɔpɛ sɛ wɔsɔ no hwɛ fii ase hwehwɛɛ sɛnkyerɛnne+ a efi soro fii ne hɔ. 17 Na ohuu wɔn nsusuwii no,+ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ahenni biara a ɛne ne ho di asi no dan amamfõ, na ofie a mpaapaemu wom no hwe ase.+ 18 Enti sɛ Satan nso ne ne ho di asi a, ɛbɛyɛ dɛn na n’ahenni agyina?+ Efisɛ moka sɛ menam Beelsebub so na etu adaemone. 19 Sɛ menam Beelsebub so na mitu adaemone a, hena so na mo mma+ nam tu wɔn? Eyi nti wɔbɛdan atemmufo ama mo. 20 Na sɛ menam Onyankopɔn nsateaa+ so na etu adaemone a, ɛnde Onyankopɔn ahenni ato mo ankasa.+ 21 Sɛ ɔbarima ɔhoɔdenfo+ bi hyehyɛ ne ho wɛn n’aban a, n’ahode tena hɔ asomdwoe mu. 22 Nanso sɛ obi a ne ho yɛ den+ sen no bɛtow hyɛ no so di no so a,+ ogye n’akode a ɔde ne ho to so no nyinaa, na ɔkyɛ nneɛma a ɔfow wɔ ne nkyɛn no. 23 Nea onni m’afa no sɔre tia me, na nea ɔne me mmoaboa ano no hwete mu.+ 24 “Sɛ honhom fĩ bi fi onipa mu a, ɔkɔfa asase kesee so kɔhwehwɛ homebea, na sɛ wannya bi a, ɔka sɛ ‘Mɛsan akɔ me fie a mitu fii mu no mu.’+ 25 Na ɔba a, obehu sɛ wɔaprapra mu kama de nneɛma asiesie mu. 26 Enti ɔsan kɔ kɔfa ahonhom ason+ foforo a wodi abɔnefosɛm sen no ka no ho, na wɔba mu bɛtena hɔ; na saa onipa no awiei sɛe sen kan no.”+ 27 Na ogu so reka eyinom no, ɔbea bi fi nnipakuw no mu maa ne nne so ka kyerɛɛ no sɛ: “Anigye ne yafunu+ a enyinsɛn wo ne nufu a wunumii!” 28 Nanso ɔkae sɛ: “Dabi, mmom, anigye ne wɔn a wotie Onyankopɔn asɛm na wodi so!”+ 29 Bere a nnipakuw no reboaboa wɔn ho ano no, ofii ase kae sɛ: “Awo ntoatoaso yi yɛ awo ntoatoaso bɔne; wɔhwehwɛ sɛnkyerɛnne.+ Nanso wɔremma wɔn sɛnkyerɛnne biara gye Yona sɛnkyerɛnne no.+ 30 Na sɛnea Yona+ bɛyɛɛ sɛnkyerɛnne maa Niniwefo no, saa ara na onipa Ba no nso bɛyɛ sɛnkyerɛnne ama awo ntoatoaso yi. 31 Wobenyan anafo fam hemmaa+ no ne saa awo ntoatoaso yi mu nnipa wɔ atemmu no mu na obebu wɔn fɔ; efisɛ ofi asase ano betiee Solomon nyansa, nanso hwɛ! nea ɛsen+ Solomon wɔ ha. 32 Wobenyan Niniwefo ne awo ntoatoaso yi wɔ atemmu mu na wobebu wɔn fɔ; efisɛ wɔsakrae wɔ nea Yona kae no ho;+ nanso, hwɛ! nea ɛsen+ Yona wɔ ha. 33 Sɛ obi sɔ kanea a, ɔmfa nsi akorae anaa ɔmfa nhyɛ kɛntɛn ase, na mmom ɔde si kaneadua so,+ sɛnea wɔn a wɔba mu no behu hann no. 34 Nipadua no kanea ne w’aniwa. Sɛ w’aniwa hwɛ tee a, wo nipadua nyinaa nso hyerɛn;+ nanso sɛ edi bɔne akyi a, wo nipadua nso yɛ sum. 35 Enti, momma mo ani nna hɔ. Ebia hann a ɛwɔ mo mu no yɛ sum.+ 36 Enti, sɛ wo nipadua nyinaa hyerɛn na baabiara nyɛ sum a, ne nyinaa bɛhyerɛn+ te sɛ nea kanea hyerɛn ma wunya hann no.” 37 Bere a ɔkaa eyi no, Farisini bi srɛɛ no sɛ ɔne no mmedidi.+ Enti ɔkɔɔ hɔ kɔtenaa adidipon ho. 38 Nanso, bere a Farisini no hui sɛ wanni kan anhohoro+ ne nsa ansa na ɔredidi no, ɛyɛɛ no nwonwa. 39 Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Mo Farisifo, mohohoro kuruwa ne ayowa akyi, na mo mu+ de, afowde ne amumɔyɛ ayɛ mã.+ 40 Nnipa a munni adwene! Ɛnyɛ nea ɔyɛɛ akyi+ no ara na ɔyɛɛ emu no? 41 Nanso, momfa nea ɛwɔ emu no nyɛ adɔe,+ na hwɛ! nneɛma a aka nyinaa ho atew wɔ mo fam. 42 Na mo Farisifo de, munnue, efisɛ muyi ɛme ne onunum ne ɛfan foforo biara so ntotoso du du,+ nanso musian atɛntrenee ne Nyankopɔn dɔ ho! Saa nneɛma yi na ɛsɛ sɛ anka moyɛ, na nea aka no nso ɛnsɛ sɛ muyi fi mu.+ 43 Munnue mo Farisifo, efisɛ mopɛ anim nkongua wɔ hyiadan mu ne gua so nkyia!+ 44 Munnue, efisɛ mote sɛ ada a wonhu na nnipa nantew so a wonnim!”+ 45 Ɛnna wɔn a wonim+ Mmara no mu biako buaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, sɛ woka saa a yɛn nso woadidi yɛn atɛm.” 46 Na ɔkae sɛ: “Mo nso munnue, mo a munim mmara no, efisɛ mode nnesoa a emu yɛ duru soa nnipa, nanso mo ankasa momfa mo nsateaa biako mpo nka nnesoa no!+ 47 “Munnue, efisɛ moto adiyifo no ada, nanso mo agyanom na wokum wɔn!+ 48 Nokwarem no, moyɛ mo agyanom nnwuma ho adansefo, nanso mofoa+ wɔn so, efisɛ eyinom na wokum+ adiyifo no na mo na moreto wɔn ada. 49 Eyi nti na Onyankopɔn nyansa+ nso kae sɛ, ‘Mɛsoma adiyifo ne asomafo akɔ wɔn nkyɛn, na wobekum wɔn mu binom ataa binom, 50 ma enti wobebisa adiyifo+ nyinaa mogya a wɔahwie agu fi wiase asefi no afi awo ntoatoaso yi hɔ,+ 51 efi Habel+ mogya so kosi Sakaria+ a wokum no afɔremuka ne asɔrefie no ntam no mogya so.’+ Yiw, meka kyerɛ mo sɛ wobebisa afi awo ntoatoaso yi hɔ. 52 “Munnue, mo a munim Mmara no, efisɛ mugyee nimdeɛ safe no;+ mo ankasa moankɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu no nso musiw wɔn kwan!”+ 53 Enti ofii hɔ no, akyerɛwfo ne Farisifo no befuw ne ho na wobisabisaa no nsɛm foforo pii 54 na wɔtɛw+ no hwɛe sɛ wobenya+ biribi afi n’anom anaa.